Semalt: Comment Ịntanetị Email Marketing mmetụta Gị Ihe Ọmụma Site La SEO
Digital numerical ọkachamara na-ejikarị ozi ahia site na mgbasa ozi dịka ụzọ isi jiri mmetụta na-emetụta ihe nchịkọta weebụ nke search engines. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ụzọ, ị ga-enwe ike ịchọta, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-edebanye aha:
Na-arụ ọrụ maka ụdị ọrụ
Chọta ihe ọmụma dị iche iche nke ụlọ ọrụ site na mkparịta ụka na ngalaba nke blog
E-mail nwere ike ịme ka otu ụlọ ọrụ nyochaa nwa foto nke marque na ibekọrịta ozi.
E-mail nwere ike ịbata mmadụ site na ndị ọzọ canaux de médias sociales
Nke a, SEO na email anaghị abanye na ya. Search engines na-abanyeghị na ndepụta nke ndị mmadụ na na na nwere ike ịbịaru n'otu oge. Otú ọ dị, ikere òkè nke ndị na-ege gị ntị site na e-mail bụ ụzọ dị irè nke na-eme ka onye ọ bụla nwee ike ịbịakwute ya n'ụzọ dị mma gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị n'ụzọ dị mma. Artem Abgarian, onye na-elekọta onye ahịa nke Ọkachamara akọwa ihe na ozi ahia site na ozi na-emetụta ntinye.
Nkwado mmekorita nke obodo
Digital ọdịnaya na e-mail dị ka okwu-igodo enweghị mmetụta na SEO nhazi. Otú ọ dị, idebanye nke campagnes nke e-mail ziri ezi na-enyere ndị kasị mma na nkwado nke otu mkpokọta aha nke na-amụba ọchịchọ search engine search engines. E-mail na-akwalitekwa okwu na ịkekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị kwadoro blog, ị ga-enwetakwa nkwupụta dị na ala nke ibe. Ihe ọ bụla ga-eme ka ị na-awụnye otu ebe n'elu ndị ọzọ platformformes en ligne tel que les médias sociales. N'ihi ya, ọtụtụ nke vues de l'article na-eme ka augmentation nke backlinks mkpa iji dịkwuo elu classification SEO. Ụfọdụ ọrụ nke arịrịọ na-arụ ọrụ nke a na-eme site na listi ozi nwere ike ịgụnye:
Chọta ndị na-ekwu okwu na ebe obibi nke blog na-ekwu banyere ụlọ ọrụ
Na-agba ndị mmadụ ume ka ha na-ekekọrịta otu ihe omume maka ịgbasa ezigbo ihe na
Mee ka ndị mmadụ na-azụ ahịa ahịa dị ka Twitter ma ọ bụ Facebook.
Flux RSS ma ọ bụ Consumer Regular Content
Mee ka ọha na eze pịa njikọ gị na ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịbụ ihe mfe mfe. Otú ọ dị, ọ nwere ike isi ike ime ka ọha na eze gbakwunye gị ọdịnaya. Nke a na-adabere na ọ dị mkpa ịbụ onye pụrụ iche na otu ụdị ọdịnaya. Ndi mmadu kwesiri ichota ọdịnaya ma le n'ihu tupu enwere ozi. Dịka ọmụmaatụ, nwere ike:
Jide n'aka na ndị mmadụ maara na ha nwere ike ịnweta site na RSS
Nye gị ohere ịlele ozi-e site na e-mail na ụfọdụ ihe kpọmkwem na
Mee ka ndị ọrụ na-abanye na social media, dị ka ndebanye na YouTube YouTube Channel
Enwere ike ịchọta ndị mmadụ mgbasa ozi gị na mgbasa ozi gị na ndị na-aga n'ihu na blog articles.
Weghachite ọdịnaya nke akwụkwọ akụkọ
Ịnakọta data site na e-mail nwere ike iji ya dị ka ọdịnaya maka blog. Ndị mmadụ na-erite uru site na iji ọdịnaya a na-edeba aha na-enyere ha aka. Dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ akụkọ nwere ike ịmepụta isiokwu nke blog nke nwere ike ịdọrọ uche maka gbakwunyere nke nkwupụta. Ozi akwukwo nke akwukwo nwere ike inweta ohere ndi ozo site na mgbasa ozi ndi mmadu site n'inyekwu SEO. Ọnọdụ a na-enye ndị mmadụ na-abụghị ndị na-edebanye aha gị RSS flux ịgụ gị.
Na-adabere na ihe ndị a kpọtụrụ aha n'elu, ndị ahịa de Ọkachamara gosipụtara na ndị ozi ịntanetị nwere ike meziwanye ọnọdụ SEO. Site n'inweta ọha na eze, site na iwepụta akwụkwọ akụkọ, ma na-agụnye mgbasa ozi nke mgbasa ozi na-ezigara ndị mmadụ, nchọpụta nke usoro nke njikarịcha nke search engines ga-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọta onye ọ bụla blog, ị ga-enwerịrị ezigbo ozi ịntanetị Source .